Soo dejisan QQ 2.11 International iyo 6.4.12593... – Vessoft
Soo dejisan QQ
QQ – software caan ah qoraalka, codka iyo isgaarsiinta video. software The kuu ogolaanayaa inaad si dar xiriirada cusub, iyaga qaybiyo kooxo, bedesho adiga kuu gaar ah online-status, xiriiro hab shirka, iwm QQ ka kooban a module gaar ah App Box oo u saamaxaaya in ay ordaan kulan iyo adeegyada kala duwan. software ayaa kuu oggolaanayaa in isgaarsiinta dhameystiran ee dadka ka yimid dalalka kale ee isticmaalaya turjumaan qoraalka dhisay-in. Sidoo kale QQ bixisaa qadar kooban oo kaydinta daruur in uu kaydiyo xogta shakhsiga ah ee.
Samee codsiyada App Box
Lacag xogta ee kaydinta daruurtii
QQ Software la xiriira:
Chat Webcams Tool caan ah oo fariin, samaynta baaqyo iyo abaabulka shirarka video. Software macaamila adeegyada caan ka Yahoo.
English, Français, Español, Deutsch... Skype 7.28.73.101
Telegram Desktop 0.9.18
English, Español, Deutsch, Português... Seaside Multi Skype Launcher 1.21
MyChat 5.17.0.3 Standard iyo Portable
Chat chat The habboon iyo MFT inay la xiriiraan on network degaanka ama internet-ka. software wuxuu bixiyaa heer sare ah ilaalinta si looga hortago baxsiga xogta.
العربية, English, Українська, Français... ICQ 10.0.12116
Chat Ayaa loo jecel yahay oo si sahlan loo isticmaali software in ay is dhaafsadaan massanges qoraalka. Sidoo kale waxa ay taageertaa wicitaanada cod iyo video.
English, Українська, Deutsch, Português... Doro PDF Writer 2.07
English, Français, Español, Deutsch... Mixcraft 7.7
العربية, English, Français, Español... AIDA64 Extreme 5.60.3700 Standard iyo Portable